Lip balm ကို နှုတ်ခမ်းအပြင် ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးလို့ရသေးလဲ? – Trend.com.mm
Lip balm ကို နှုတ်ခမ်းအပြင် ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးလို့ရသေးလဲ?
Posted on December 27, 2017 by Noel
Lip balm က မိန်းကလေးတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့။ အထူးသဖြင့်ဆောင်းတွင်းမှာ ဆိုရင် Lip balm က ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ Lip balm က နှုတ်ခမ်းအတွက်ပဲ အသုံးဝင်တာလို့ ထင်ရင်သင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ Lip balm ကို ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးနိုင်လဲဆိုတော့…
သင့်ရဲ့မျက်နှာမှာ ပြောင်ပြောင်တောက်တောက်လေးဖြစ်နေစေဖို့ Lip balm ရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ်။အချိန်အကြာကြီးမခံပေမဲ့ အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အခါသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
မျက်ခုံးမွှေးက ဆွဲရတာအဆင်မပြေဘူး။ရေရှည်လည်းမခံဘူးလို့ထင်နေရင် Lip balm လေးနည်းနည်း ယူပြီးမျက်ခုံးမှာပွတ်ပါ။ပြီးမှမျက်ခုံးမွှေးဆွဲပါ။ သဘာဝကျကျနဲ့လှပတဲ့မျက်ခုံးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
နှုတ်ခမ်းကို အရောင်စုံဆိုးချင်တယ်ဆိုရင် Lip balm ကို အိုင်းရှဲဒိုးနဲ့ရောစပ်ပြီး သုံးလို့ရတယ်နော်။အရောင်စုံပြီးဆန်းဆန်းပြားပြားလေးဖြစ်တာပေါ့။
အိုင်းရှဲဒိုးကို ဂျယ်လ်လိုမျိုးဆိုးချင်တယ်ဆိုရင်၊အကြာကြီးခံချင်တယ်ဆိုရင် အိုင်းရှဲဒိုးမခြယ်ခင်မှာ Lip balm ကိုခံလိမ်းပါ။ပြီးမှခြယ်ပါ။ဒီနည်းလမ်းကအိုင်းရှဲဒိုးကိုအကြာကြီးခံစေပါတယ်။
ရှုးဖိနပ်အသစ်စီးတဲ့အခါ ခြေဖနောင့်မှာနာကျင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်အောင် Lip balm ကိုခြေဖနောင့်မှာအနည်းငယ်လိမ်းပြီးမှစီးပေးပါ။
ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။နှာချေတဲ့အခါ Lip Balm ကိုသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့။ အအေးမိလို့ ခဏခဏနှာချေတဲ့အခါ နှာခေါင်းအရေပြားကိုနာကျင်စေပါတယ်။ ခဏခဏနှာချေနေရင် Lip balmအနည်းငယ်ကိုယူပြီး နှာခေါင်းအတွင်းအနည်းငယ်ကို သုတ်လိမ်းပေးထားပါ။
ဆံပင်တွေပွယောင်းယောင်းဖြစ်ပြီးရှုပ်ပွနေတဲ့အခါ Lip balmကိုယူပြီး လက်မှာအနှံ့ပွတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ဆံပင်တွေကိုသပ်ချပါ။ဆံပင်တွေမပွတော့ပဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ရိုက်နှက်ခံပြီး ကြီးပြင်းလာရတဲ့ကလေးတွေဟာ ပိုမိုရိုင်းစိုင်းလာနိုင်